Talooyin wax ku ool ah oo loogu talagalay Qorista Odhaah Shakhsiyeedka 2022
Sida Loo Qoro Qormo Ogolaanshaha Qalinjabinta Weyn
Odhaah shakhsiyeed oo wanaagsan ayaa kaa caawin karta kor u qaadida rajada qalinjabinta qofka sidaa darteed waxaa muhiim ah in diirada la saaro dhawr qaybood oo muhiim ah si loo xoojiyo qoraalka qofka.
Bayaanka shakhsi ahaaneed ee sidoo kale loo tixraaco bayaanka ujeedada, waa qaybta codsiga dugsiga ka qalin jabiyay halkaas oo codsadayaasha loo oggol yahay inay muujiyaan meelaha ay xiiseynayaan.
Waa muhiim in lagu daro khibrado xirfadeed gaar ah iyo kuwa shaqsiyadeed kuwaas oo saameeyay go'aanka lagu codsanayo dugsiga qalin-jabinta iyo muujinta sida ay tani u caawin doonto codsadayaasha inay ku guuleystaan ​​barnaamijka ay u codsanayaan.
wanaagsan A qoraa sheeko waa in ay soo baxaan sababtoo ah waxay si togan u muujineysaa khibradaha gaarka ah, muhiimka ah, iyo gaarka ah ee la xidhiidha aagga codsadaha ee xiisaha oo muujiya aqoonta iyo waayo-aragnimada aagga khibradda la xidhiidha.
Bilaabida iyo dhameynta bayaanka shaqsiyeed
Sida qormo kasta oo kale ah, furitaanka soo jiidashada leh waa inuu akhristaha u soo jiidaa, gunaanadkuna waa inuu dib u sheegaa fikradda ugu weyn ee qormada oo uu ku soo gunaanado qormada si wanaagsan.
Furitaanka wanaagsani waxa uu noqon karaa xaqiiqo xiiso leh oo la xidhiidha khibrad shakhsi iyo mid xirfadeed, odhaah soo jiidasho leh ama xaqiiqo la xidhiidha aagga xiisaha, ama jumlad fudud oo sheegaysa in barnaamijka qofku codsanayo iyo sababta. Furitaanka iyo xidhitaanku waa inay abuuraan cod dheeli tiran, haddana togan oo bayaan shakhsi ah.
Waxa lagu daro Qormada Dugsiga Sare
Qoraalka shakhsi ahaaneed waa qayb muhiim ah oo ka mid ah codsiga dugsiga sare sababtoo ah inta badan waa qaybta kaliya ee codsiga halka codsadaha loo oggol yahay inuu u gudbiyo guddiga oggolaanshaha.
Akhristayaashu waxay raadinayaan qormada codsadaha si ay u helaan macluumaad gaar ah oo ku saabsan diiradda cilmi-baarista ee codsadaha iyo caddaynta xubnaha macallimiinta ee jira iyo/ama cilmi-baarista hadda ee jaamacadda ee waafaqsan danaha cilmi-baarista ee la sheegay.
Waxay sidoo kale eegayaan inay arkaan in hadafyada xirfadeed ee codsadaha ay la socdaan hadafyada barnaamijka iyo siyaabaha ay hadafyada shaqo ee qalin-jabinta ka dib codsadaha ay gacan uga geysan doonaan barnaamijka, goobta waxbarashada, ama adduunka guud ahaan.
Ka jawaabista su'aalahan waxay siin doontaa aasaaska ay guddiga arjiyada qalin-jabinta ka qiyaasi karaan ujeedooyinka codsadaha oo ay go'aamiyaan haddii isaga ama iyada ay ku habboon yihiin barnaamijka.
Xaqiijinta Qoraal Shakhsiyeed
Waxay muhiim u tahay caddayn si aad si fiican u hubiso higaada, naxwaha, xarakaynta, doorashada kelmad, dhererka, iyo guud ahaan akhrinta. Odhaah shakhsiyeedku inta badan waa inta u dhaxaysa 500-1000 kelmadood oo la qoray, far 12 dhibcood ah. Fikradaha ugu muhiimsan waa in lagu jebiyaa qaabka cutubka.
Qorayaashu waa inay adeegsadaan erayo qeexan oo cad oo aan aad u hadal ahayn. Codka qoraalka shakhsi ahaaneed waa inuu noqdaa mid togan oo kalsooni leh. Ugu yaraan laba qof oo kale waa inay caddeeyaan bayaan shakhsiyeed si ay u helaan nuxurka iyo sixitaanka ka hor inta aan la gudbin.
Odhaah Shakhsiyeed Waxa Sameeya iyo Ha yeelin
Qorayaashu waa inay taxaddaraan si ay uga fogaadaan faan, sharraxaad dheer, isticmaalka xad dhaafka ah "I", tixraaca waxyaabaha aan la xiriirin danaha qalin-jabinta ee la sheegay, jumladaha ordaya, af-lagaadada ama luqadda aan xirfadda lahayn, higaada ama khaladaadka naxwe ahaaneed, ama dib-u-sheegida macluumaadka resume.
Taa beddelkeeda, adeegso ereyada iyo weedhaha kala-guurka (sida weliba, sidaas darteed, iwm.), danaha cilmi-baarista gaarka ah ee dawlad-goboleedka, iyo magaca xubnaha macallimiinta markay danahan la xiriiraan, ka jawaab dhammaan su'aalaha isla markiiba, beddel jumlada dherer, daacad ahow oo haddana is-hoosaysiiso, oo weydii saaxiibo ama saaxiibo aad aaminsan tahay inay akhriyaan qormada oo ay jawaab-celin ka bixiyaan.
Bayaanka ujeedadu waa qayb muhiim ah oo ka mid ah codsiga dugsiga qalin-jabinta. Waa muhiim in codsadayaashu ay si cad u sheegaan ujeeddooyinkooda dugsiga ka qalin-jabinta, inay ilaashadaan cod togan oo xirfad leh oo ay si fiican u akhriyaan qormada khaladaadka. Talooyinkan ayaa kaa caawin doona in la hubiyo in qoraalka shakhsiyeed uu yahay qayb dhamaystiran oo soo jiidasho leh oo ka mid ah codsiga dugsiga qalin-jabinta.
Sida Loo Qoro Taariikh nololeedka Barnaamijka Isdhaafsiga Ardayga
Previous Post:Sida Loo Qoro Taariikh nololeedka Barnaamijka Isdhaafsiga Ardayga
Post Next:Qoritaanka Qancinta ee Ardayda Kulliyada